Ingabe Ukugqwayiza kuma-imeyili Kuyasebenza Ngempela? | Martech Zone
Ingabe Ukugqwayiza kuma-imeyili Kuyasebenza Ngempela?
NgoLwesithathu, Okthoba 3, 2012 NgoMsombuluko, Juni 8, 2015 UMeen Boriboune
Unemizuzwana engama-30 yokubamba ukunaka kwabafundi bakho uma bechofoza ku-imeyili yakho. Nakanjani leli iwindi elincane. Uma ufana nami, lapho-ke ungakucabanga lokho izithombe kuyingozi kancane ukukusebenzisa ukumaketha nge-imeyili, kepha ufuna ukuheha abamukeli bakho. Ngakho-ke, wenzani?
Kodwa-ke, ngemuva kokudlula ukumaketha kwethu nge-imeyili isexwayiso somkhuba womxhasi, lokhu kungaba yithuluzi elihle labathengisi be-imeyili uma lifakwe ngempumelelo.
Akukona nje ukuthi ukugqwayiza kuyindlela enhle yokubamba ukunaka kwabafundi, kepha futhi kuvumela abathengisi ukuthi banake ngobuhlakani imikhiqizo eminingi, okunikezwayo, noma ukubizela ezenzweni. Akufanele futhi uvumele lokhu kugqwayiza kuthinte ukuhanjiswa kwakho. Gcina usayizi wokugqwayiza uncane, gcina i-animated GIF ibe ozimele abangu-6 kuphela, futhi uqiniseke ukuthi ifreyimu yokuqala ifaka umyalezo (uma ukhona) ukuze ama-imeyili akho angabi nenkinga yokubanjwa kufolda yogaxekile.
Ukuze uthole amathiphu amaningi wokuklama nokuletha ukugqwayiza ku-imeyili yakho, hlola ama-Delivra's Ukugqwayiza kuma-imeyili: Ungakufaka Kanjani Ngokuphumelelayo Lo Mkhuba Wamuva.
Landa iPhepha Elimhlophe!
Tags: AnimationOkuqukethwe kwe-imeyiliimeyili MarketingSubscribersI-Whitepaper
UMeen ngumfundi waseButler Marketing ohlangana neqembu ku DK New Media. Imisebenzi kaMeen ifaka phakathi ucwaningo nokukhiqizwa kokuqukethwe kwamakhasimende abo, ngaphansi kokuqondiswa kwe- UJenn Lisak.
Ungayakha Kanjani i-Logo
I-infographic nePrezentheshini: Ukuvela Kokukhangisa Kwedijithali